सिंगापुरमा हुन लागेको ट्रम्प र किमको शिखर वार्ताबारे सिंगापुरका प्रधानमन्त्री के भन्छन् ? | suryakhabar.com
Home अन्तर्राष्ट्रिय सिंगापुरमा हुन लागेको ट्रम्प र किमको शिखर वार्ताबारे सिंगापुरका प्रधानमन्त्री के भन्छन् ?
सिंगापुरमा हुन लागेको ट्रम्प र किमको शिखर वार्ताबारे सिंगापुरका प्रधानमन्त्री के भन्छन् ?
on: २८ बैशाख २०७५, शुक्रबार १५:१३ In: अन्तर्राष्ट्रियTags: No Comments
सिंगापुर । सिंगापुरका प्रधानमन्त्री लि सेन लुङले अमेरिका र उत्तर कोरियाबीच हुने भनिएको शिखर वार्ता शान्ति स्थापनाका लागि एक महत्वपूर्ण कदम भएको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री लिले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ट्वीटको प्रतिउत्तरमा भनेको छः हामीलाई लाग्छ यसले आगामी दिनमा विश्व शान्तिको लागि सही मार्गनिर्देश गर्नेछ ।
उक्त वार्तामा हुने कुराकानीको विषयमा भने सन्देशमा केही उल्लेख गरिएको छैन । उनले विश्वकै चासोको र प्रतिक्षाको उक्त विषयको अन्त्य भएको भन्दै सिंगापुरमा वार्ता हुने ट्वीटरमार्फत जनाएका छन्।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनबीच गर्ने उच्चस्तरीय भेटवार्ताको तयारी भइरहेको पनि बताएका छन् । यसका लागि उत्तर कोरियाले आफ्नो थुनामा रहेका अमेरिकी नागरिकलाई पनि बुधबार नै रिहा गरेको छ ।
सो वार्ताको सफलताको लागि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले पछिल्ला केही दिनयता विभिन्न एसियाली देशका नेताहरुसँग फोनवार्ता जारी राख्नुभएको छ । उहाँले उत्तर कोरियासँग वार्तामा बस्न आफू प्रतिक्षारत रहेको पनि बताएका छन् । -रासस÷सिन्ह्वा
६ बर्षदेखि प्रेममा रहेका बल्छी ध्रुबेले कसे लगनगाठोँ !
८ श्रावण २०७७, बिहीबार २०:३५
८ श्रावण २०७७, बिहीबार २०:२८
२८ बैशाख २०७५, शुक्रबार १५:१३